Evolvere-icon-theme, KDE အတွက် icon set Linux မှ
Evolvere-icon-theme၊ KDE အတွက် icon set
vr_rv | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်
ဖန်တီးထားသောအေးမြ။ စတိုင်ကျသောအိုင်ကွန်အစုံ Frank Souza KDE desktop နှင့် Flat design craze တို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ desktop မှ screenshots အချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၎င်းတွင်မတူညီသောမျိုးကွဲများရှိသည်။ Evolvere၊ အစိမ်းရောင်ဖိုလ်ဒါများ၊ အနက်ရောင်ဖိုင်တွဲများ၊ အပြာရောင်ဖိုလ်ဒါများ y Evolbuntu ဖြစ်သည်ငါသုံးတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန်သင်သိသောဖိုင်တွဲများကိုသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက် ~ / .local / share / icons / or / usr / share / icons / ထဲမှ unzip လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည်။ စာရေးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည် -
SMPlayer: ဖြစ်ခြင်းအချိန်ကိုများအတွက်, ခေါင်းစဉ် သာရရှိနိုင်ပါသည် အနက်ရောင်နဲ့. ငါnstructions ၏ ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ သူတို့ဝင်နေပြီ ဖိုလ်ဒါ "အပို " တစ်ခုချင်းစီ၏ဖိုင်တွဲထဲမှာ အဆိုပါမူကွဲ မှောငျမိုကျသော။
1 - မတိုင်မီက el icon ဆောင်ပုဒ် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ ဖန်တီးခဲ့တာပါ သီးသန့်အတွက် ရှင်းလင်းသောအကြောင်းအရာများသို့သော် အများအပြားတောင်းဆိုမှုများကိုပြီးနောက် ကျွန်တော် ... ဆုံးဖြတ်ပါသည် ကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အမှောင်ပတ်ဝန်းကျင်.
2 - အရာအားလုံး နှင့်အတူ icon များ သေးငယ်အရွယ်အစား သို့မဟုတ်ညီမျှသည် 24px သူတို့ monochromatic ဖြစ်ကြသည် (ငါက လူတိုင်း)အလွန်နည်းပါးသော ခြွင်းချက်ကဲ့သို့ အထိမ်းအမှတ်များနှင့် အချို့သော ၏လုပ်ရပ်များ အိုင်ကွန်များ။ ဤ ကျိုးပဲ့ကာကွယ်တားဆီး de အိုင်ကွန်များ စံပြ အချို့သောအခြေအနေများတွင်. ထိုကွောငျ့, မင်းတွေ့ရင် ကလေးငယ်များ အရောင်အိုင်ကွန်, ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မသေခြာဘူး သူတို့ချိန်ညှိပြီသို့သော် အဲဒါပြီးပြီ။ ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည် တစ်မူကွဲဖန်တီးပါ နေခြည် ရောင်စုံ, ဒါပေမဲ့ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Evolvere-icon-theme၊ KDE အတွက် icon set
အမှန်မှာ Zukitwo သည်ပြတင်းပေါက်အလှဆင်သူဖြစ်သည်။
Williams က ဟုသူကပြောသည်
ဤ icon pack သည် KDE ဖြန့်ဝေမှုများအတွက်သာအလုပ်လုပ်သည်။
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အားသူတို့ကို Mint 17 Cinnamon တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးသူတို့သည်မည်သည့်ပြwithoutနာမျှမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်၏ LXDE ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ထည့်ထားခြင်းရှိမရှိကြည့်ပါရစေ (အကယ်၍ ကျန်ခဲ့သည်ဆိုပါစို့)
အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများကျွန်ုပ်၏ openSUSE 13.1 နှင့် LinuxMint17 နှစ်ခုစလုံးတွင် KDE ၌သူတို့ကိုရက်အနည်းငယ်လောက်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ငါဟာများသောအားဖြင့် "Flat" ဖက်ရှင်ဝါသနာရှင်မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းသဘောကျတယ်။ download site သည် third-party cookie တစ်မျိုးမျိုးကိုလိုချင်သည်ဆိုသည့်အတွက် ၀ မ်းနည်းမိသည်။ အရင်က Firefox ၌ရှိခဲ့သော cookie ပေါ်လစီများနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရာတွင်အခက်အခဲမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်ဤ "fly" ဆိုဒ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာစိတ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပြီး icon များကိုဒေါင်းလုပ်ချခဲ့သည်။
စန်တီယာဂို alessio ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါအဲဒါကို mint 17 မှာ install လုပ်ထားတယ်
santiago alessio သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ Linux အတွက်အသစ်ပါ။ Ubuntu 14.04 မှ စတင်၍ ဤ icon များကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ သို့သော် download / path သို့ / usr / share / icons / ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးချရမည်ကိုမသိပါ၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်နှင့်ပါသနည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ မက္ကဆီကိုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုဒါထဲတွင်ထည့်ရန်ကြိုးစားပါ၊ သင် "ကူးယူထားသော" အိုင်ကွန်များဟုခေါ်သောလျှို့ဝှက်ဖိုင်တွဲတစ်ခုရှိသည်။ သင် download လုပ်ထားသောအရာကို unzip လုပ်ပါ။
Breeze: ဘာကြောင့် KDE5မှာပုံမှန်မဟုတ်တာလဲ။